Ukuzenza Siphelele - Khetha Uphawu
I-horoscope yethu yonke yimephu yoMphefumlo wethu kulo lonke umanyano, kunye nazo zonke ezo planethi zikhohlakeleyo kunye nezikhundla, zonke zazo. izikwere kunye nenkcaso , kunye nomoya ohlala kwindawo yethu indlu yesibhozo – zikude kwaye zihlala zilahlwa kwinkunkuma. Iiplanethi kunye namaqumrhu afunyenwe kwindlu yethu yesibhozo athetha ngezo ndawo zobuntu bethu eziya nzulu kwaye sithanda ukongamela, ukutyhala, okanye ukuziva sineentloni, nangona zihlala zingabantu kwaye ziqhelekileyo njengabo bonke abanye abantu.
Ukudibana Nezithunzi Zethu
Ukuba siyamelana nobizo lobumnyama bethu bangaphakathi ngeentlungu, siya kutyhalwa kwaye sikhunjuzwe ziimeko ezinzima ukuba izinto ebomini bethu kufuneka zitshintshe. Ngokuqinisekileyo kuya kuba lula kakhulu kumntu owakhe indlu yokuqala irula inxibelelana kakuhle namaqumrhu akhohlakeleyo kwitshathi yawo ukuze asuke kumava asisithintelo aze awabambe. Nangona kunjalo, asisikelelwanga sonke ngezikhundla ezinjalo, kwaye ngokwesiqhelo siya kubona ukuba abantu bonke bayasokola kuloyiko kunye nezithintelo ezifanayo, ezilawulwa kwaye zisekwe kuloyiko lwabo lokuqala lokufa. Ngethamsanqa, asazi nto malunga nokufa emfanekisweni omkhulu wezinto, kwaye oku kusivumela ukuba sikhulule kwaye silinde ixesha lethu ukuba lifike ngolonwabo olugqibeleleyo, ukuba sizimisele ukukhulula uloyiko lwezinto ezingaziwayo kwaye siphile ngokulula kwi-ihlabathi. umzuzu.
Imiba yethunzi ihlala ineemvakalelo kunye ne-subconscious, kwaye kufuneka sithathe ixesha lokujongana nayo kwaye siyizise phezulu. IPsychology nazo zonke iindlela zayo zinokunceda, kunye nazo zonke iintlobo zokuphiliswa ngamandla, ukuhlehla, i-shamanism, kunye nokuvavanya umthi wethu wosapho. Ubunzulu bophando kufuneka bufakwe kwi-lens yeemvakalelo zethu ngokweemvakalelo nangona kunjalo, okanye iya kuba luluhlu lolwazi olungabonisi indawo yoxanduva lomntu kumntu oluqokelelayo. Kufuneka siqonde ukuba ubomi bethu busezandleni zethu kuphela ngaphambi kokuba sithathe isigqibo sokunika igunya nakubani na kwaye silibone ihlabathi elingaphandle njengomthombo weengxaki zethu. Oku kuthetha kakuhle ngongquzulwano oluphambili lwe Ilanga nge ISaturn kunye neengongoma zabo zokuphakanyiswa kwaye ziwela ngokusondeleyo enye kwenye Aries kwaye Iponti .
Xa Ulwakhiwo Lusilela
Umqondiso wokuqala wokuba kukho into engalunganga ngombono wethu weSelf iseti yeemeko ezihamba kancinci kakhulu, ukungakwazi kwethu ukuba yinxalenye yenkqubo, yonke into enkulu, ukusebenza kunye nokwakha umsebenzi wethu, okanye ukutyhala izinto zangaphandle. ihlabathi lisenza sitshintshe naxa singafuni. Zonke iimeko ezibonakala zingenandlela yokuphuma azikho ngokwenene ukuba zibonwe njengezingenakuphepheka, kwaye nangona izifundo ISaturn bahlala bethetha ngokwamkelwa, abakhe bathethe ukuba masihlale sibambekile koko siyamkele. Ubume obumileyo be Capricorn ayimi kwaphela xa ucinga ngayo, kuba olu luphawu lwekhadinali apho Mars iphakanyiselwe phezulu, kwaye ayiboni ngqiqo ekubeni UNGATHATHI inyathelo elisingise kwikamva elingcono. Oko ESIFANELE siyamkele yinyani, kanye njengokuba kunjalo ngeli xesha, ngoko sinokusebenza indlela yethu yokuphuma kwiimeko ezixinzelelekileyo kunye noqhagamshelwano oluqhubekayo kwinto eyinyani kunye nekhoyo.
Okwangoku, iMars ikwinqanaba lokuphakanyiswa kwayo eCapricorn, iphakamisa intloko yayo ediniweyo emva kokusinceda ukuba sifunde okuninzi malunga nehlabathi lethu langaphakathi. Ikulungele ukusifundisa ukuba singomelela kwaye sizimisele kangakanani na, njengoko sizibandakanya nabo bonke ubuthathaka bethu kunye nokusilela kwethu ngaphakathi. Umsindo kufuneka ube ngowakhayo, amandla ethu alathe kwicala elifanelekileyo, kwaye ikamva lethu lichazwe kwangaphambili ziintshukumo zethu kamsinya nje sakuba samkele apho sikhoyo kwaye yintoni ubunyani balo mbandela. Yiya konwabe ngakumbi, uqonda ukuba isiqu sakho esipheleleyo silele kulungelelwaniso lwenkcaso onayo ngaphakathi. Okukhona usiba buthathaka, kokukhona uya kuziva unamandla. Okukhona ubona okungalunganga kwaye ukuwola entliziyweni yakho, kokukhona kuya kuba lula ukwamkela abanye kwaye ufumane inqaku lokunxulumana elikwenza wonwabe. Ukuzenza siphile, kufuneka sibone ukuba akukho ntloni kwaye akukho tyala ekubeni ngumntu, kuba nje sikulungele ukuthatha uxanduva olupheleleyo kulonwabo lwethu, nokuba oku kuthetha ukubeka imida ecacileyo kwabo basithandayo kodwa siwahluthe amandla ethu ngokungazi.
Aquarius Khetha Uphawu I-Scorpio Khetha Uphawu Gemini